Tsipy kanetibe – “Tompondaka eran-tany”: “Afa-baraka ny firenena malagasy”, hoy i Tita | NewsMada
Tsipy kanetibe – “Tompondaka eran-tany”: “Afa-baraka ny firenena malagasy”, hoy i Tita
Nanoloana ny vokatra ratsy azon’ny ekipam-pirenena malagasy, taranja tsipy kanetibe, tany Kanadà, nandritra ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany 2018, naneho ny alahelony, Razakarisoa Tita (Mims), anisan’ireo mpilalao nahazo izany, ny taona 2016.
“Menatra ny tenako”, hoy izy, nandritra ny tafa fohy, nataony tamin’ny mpanao gazety, omaly, tetsy Mahamasina. “Amin’ny maha tompondaka eran-tany farany ny tenako, mahatasapa fa tena afa-baraka tanteraka, i Madagasikara, tamin’ireny vokatra ireny satria i Alemaina no nandresy antsika tamin’isa, 13 no ho 1. Tsy mbola nisy malagasy raraka tany amin’ny ampahavalon-dalana izany”, hoy izy.
Nomarihiny fa anton’izany, ny tsy fijerena sy fanaovana ambanin-javatra ny mpilalao. “Nahavariana, ireo firenena rehetra tany Kanada, ny tsy nahitana anay tonga tany an-toerana. Mpilalao iray nahazo izany tamin’ny 2016 ihany no tonga tany. Ny olon-drehetra anefa niandry anay”, araka ny nambaran’i Mims. Naneho ny alahelony ity mpilalao tompondaka eran-tany ity, tamin’ny fanilihana, na ny mpilalao, na ny mpanazatra, voatery nametra-pialàna, mihitsy.
“Fahadisoana teo amin’ny resaka «coaching» no nahavoa antsika. Frantsa, ekipa “favori”, aza, lavontsika, 13 no ho 12, nefa dia i Alemaina, no nanakana ny Malagasy. Amiko ekipa gasy fa tsy ekipam-pirenena, iny nalefa tany Kanadà iny”, hoy i Mims. Nanamarika i Tita fa lesoka eto Madagasikara koa, ny tsy fijerena ireo tompondaka eran-tany, izay tokony homena zavatra mivaingana, toy ny trano, na tany sy ny sisa, ankoatra ilay lelavola, nomen’ny filoham-pirenena, teny Iavoloha. “Tokony hijery izany, ny ho mpitondra ho avy eo”, hoy izy, namarana ny teniny.